Sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka daraawiisha Puntland oo lagu dilay Bossaaso; taariikhdiisa oo kooban. – Radio Daljir
Juunyo 13, 2011 12:00 b 0
Bossaso, June 13- alle ha u naxariistee waxaa maanta qabuuraha magaalada Bossaso lagu aasay Axmed Aadan Yuusuf ‘Tiibbo-tiibbo’ oo ka mid ahaa saraakiisha taliska guud ee ciidanka daraawiishta Puntland, kaasoo shalay galab lagu dilay magaalada Bossaso.
Dilka marxuubkaan ayaa waxaa gaystay rag hubaysan oo aan illaa iyo haatan si rasmi ah loo aqoonsan kuwaasi oo rasaas ku furay xilli uu ka soo baxay gurigiisa kaddibna baxsaday sida dad goob-joogayaal ahi Daljir ay u xaqiijiyeen.
Ciidamada ammaanka ee magaalada Bossaso ayaa isla markiibtay tagay halka ay wax-ka-dhaceen waxaana ay bilaabeen baaritaanno la xiriira cidda falkaasi ka danbaysay, mana jirto wax xog ah oo illaa iyo haatan ay soo bandhigeen oo ku saabsan sida wax-u-dhaceen.
Ma cadda falkaani in uu yahay mid aano iyo aargoosi qabiil la xiriir iyo in uu yahay mid ku salaysan falalka kale lagu dilay saraakiil badan oo dawladda ka tirsan, kuwaasi oo inta badan dawladdu ay sheegto in ay ka danbeeyaan kooxo nabad-diid ah.
Taariikhdiisa oo kooban:
Alla ha u naxariistee Tiibbo-tiibbo Wuxuu ku dhashay kuna barbaaray magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag halkaasi oo uu ku soo qaatay waxbarashadii illaa dugsi sare.
Tiibbo-tiibbo, waxaana uu ciidamada qortay sanaddii 1975-tii, xilligaasi oo uu galay kuliyaddii Jaalle Siyaad kaddib markii uu qaatay shahaadadii dugsiga sare, waxaana uu bartay aqoon-dheerna uu u lahaa sharciyada ciidamada.
Waxaana darajadiisa ciidannimo ee ugu horraysay ay u bilaabatay sanaddkii 1976-dii xilligaasi oo la siiyey xiddigtii ugu horraysay, waxaana kaddib uu ka qayb-galay dagaalkii 1977-dii ee dhex-maray dawladaha Soomaaliya iyo Ethoipia, isagoo halkaasi ku mutaystay dallacsiin iyo darajooyin is xig-xigay.
Markii laga soo laabtay dagaalkii 77-diina waxaa ku-xigeen loogu magacaabay Agoontii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana darajadiisa ciidan ay gaarsiisnayd markii ay dhacday dawladdii dhexe ee Soomaaliya gaashaanle sare ama kornayl.
Burburkii Soomaaliya intuu dhacayna waxaa uu ka mid ahaa saraakiishii maamullo badan oo Soomaaliya loo soo dhissay, sida maamulkii uu m/weynaha ka ahaa C/llaahi Yuusuf Axmed iyo midkii ka horreeyey ee C/qaasim Salaad Xasan.
Labadii sano ee ugu danbaysay Tiibbo-tiibbo, waxaa uu taliye u ahaa ciidamada deegaanka Laac-dheere ee duleedka-galbeed ee magaalada Garoowe, waxaana uu haatan ka mid ahaa saraakiisha taliska guud ee ciidanka daraawiisha Puntland.
5 Carruur ah oo shuban-biyood iyo Jadeeco ugu dhintay isbitaalka Garoowe.